2- ABUL-CAAS BINU RABIIC AL-ANSAARI
Markii uu Rasuulka (scw) arkay kuushii waxaa dabooshay Murugo, wuuna u jilcay gabadhiisa isagoo eegay xaggaa iyo asxaabta wuxuuna yiri "Maalkan waxaa soo dirtay Zeynaba iyadoo rabta inay ku furato Abul-Caas, ee ka warama haddii aad u aragtaan in aan u sii deyno Abul-Caas, una celinno maalkeeda waad sameyn kartaan". Saxaabadii ayaa waxay yiraahdeen "Haa, waana ra�yi wanaagsan Rasuulkii alloow". Hase yeeshee Rasuulka (scw) wuxuu Abul-Caas ku xiray sii deyntiisa in uu u soo diro gabadhiisa Zeynaba isagoo aan dib dhicin. Abul-Caas markii uu tagay Magaaladii Makka, wuxuu si dhaqso ah u billaabay in uu fuliyo ballankii. Wuxuu amray xaaskiisa Zeynaba in ay u diyaar garowdo Safar, wuxuuna u sheegay in Ergadii aabaheed ay ku sugayaan meel aan ka fogeyn Magaalada Makka, isagoo u diyaariyay sahaydaydii safarka iyo ninkii raaci lahaa oo ahaa walaalkiis Camar Binu Rabiic.
Camar Binu Rabiic ayaa soo baxay maalin cad, isagoo wada gabadhii Zeynaba, qureyshna ay arkeyso markaas ayeey waxay soo daba galeen Camar iyagoo cabsi gelinaya Zeynaba ilaa ay kaga soo dhowaadeen. Camar ayaa soo baxsaday fallaartiisa, isagoo leh "Wallaahi ruuxii xaggeyga u soo dhowaada waxaan qoorta kaga ganayaa fallaarta", wuxuuna aad u yiqiinay fallaar ganidda. Abuu-Sufyaan Binu Xarbi ayaa soo aaday xagga Camar, wuxuuna ku yiri "Adeer naga leexi fallaartaada ilaa aan kaala hadalno". Camar wuu ka yeelay. Abul-Caas ayaa Camar ku yiri "Camaroow kuma saxsanid falka aad sameynayso, waxaad waddaa iyadoo dadkoo dhan ku arkayaan Zeynaba, waadna ogtahay Carab khasaarihii kaga soo gaaray Muxammad, haddii aad kaxeyso gabadha qabaa�ilka carab oo dhan waxay nagu sheegayaan inaan fuley nahay, waxayna nagu tilmaamayaan dulli iyo wax ma garato, ee ka waran haddii aad u celiso gabadhaan gurigeeda, ilaa ay ka iloobaan dadka oo markaas si sir ah aad u kaxeysatid, markaasna aad u geysid aabaheed, waayoo wax dan ah aan ka leenahay heynteeda ayaan jirin".